Wararkii ugu dambeeyay Dagaalkii Maanta ka qarxay Oo si rasmi ah Caawa ujoogsaday iyo Gaadiid lakala qabsaday oo la soo bandhigay – Daily Som
Wararkii ugu dambeeyay Dagaalkii Maanta ka qarxay Oo si rasmi ah Caawa ujoogsaday iyo Gaadiid lakala qabsaday oo la soo bandhigay
By Staff on May 15, 2018 No Comment
Warar Caawa Naga soo gaaraya Magaalada Laas caanood ayaa sheegaya in uu si rasmi ah uqaboobay Dagaalkii saakay ka qarxay degaanka Tukaraq ee gobolka Sool, ka dib markii ay ka da’een roob xooggan goobaha lagu dagaalamayey kaasoo hakiyey socodka gawaarada gaashaaman ee dagaalka la isku adeegsanayey sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degaankaas oo saaka waaberigii uu ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland.
Dagaalka ayaa ka bilowdey laba jiho oo ka baxsan laamiga. Ciidamada Puntland ayaa sheegtey in ay qabsadeen ilaa 6 gaari oo kuwa gaashaaman ah oo uu ka mid yahay gaari gaashaaman iyadoo wararka qaar ay sheegayaan iney jiraan gaadiid sidoo kale laga qabsaday ciidamada Puntland.
Istraatiijiyadda dagaalkan ayaa aheyd mid ka duwan sidii markii hore la filaayey inuu ka dhacayo laamiga, waxaana dadka ka faaloodaa sheegayaan in Somaliland dagaalka dhanka miyiga ka dhacay ay dhibaato xooggan ku tahay, iyadoo markii hore la filayey in waddada laamiga ah la isku heli doono.
waxaa ku geeriyooday Ciidan Kor udhaafaya ilaa 50 askari oo ka tirsan labada Maamul, halka askar ku dhow 100 oo labada dhinac ah ay ku dhaawacmeen, waxaana jira gaadiid la kala qabsaday iyo qaar la iska gubay.
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidanka Puntland ay gaareen banaanka Tukaraq, ayna ciidamadii Somaliland ka saareen Magaalada.
Cabdullaahi Maxamed Jaamac ayaa sheegay in ciidanka Puntland ay gacanta ku dhigeen Beebayaal iyo gawaari kale oo uu sheegay in ay wateen ciidanka Hargeysa, isagoo xusay iney Saxaafadda ku casuumi doonaan Tukaraq.
Wararkii ugu dambeeyay Dagaalkii Maanta ka qarxay Oo si rasmi ah Caawa ujoogsaday iyo Gaadiid lakala qabsaday oo la soo bandhigay added by Staff on May 15, 2018